amayeza rheumatism - Shijiazhuang YiLing Hospital
1) Xianling Huoluo Powder: ndiziva uthothe i nesichotho kuyabanda, detoxifies kwaye kususa stasis. Isetyenziswa scleroderma ukuba unesifo coagulation ukubanda stasis igazi, ngokubonisa ulusu intamo, lalingqingqwa kwaye edematous kunye isilungiseleli seglosi of Yanjengomthwebeba, yoma kwezihlunu, limited umsebenzi iimoto, paucity olubuso, ukulahleka ubuchule ukuvala amehlo, acrocyanosis, arthralgia kunye carcinomas isikhumba owomileyo, njl
2) Dangui Huoluo Powder: It iyawasusa ubushushu kunye nezinto ityhefu. Oku kusetyenziswa ulusu intamo, engqindilili, idumbile kwaye nzima okubangelwa scleroderma nangokuvutha ziyityhefu kwaye ukunganyangeki stasis igazi, xa sicinezelweyo iya othe apha phezulu, esikhanyayo njengomthwebeba, ne umsebenzi motor elinganiselweyo, kunzima ekuwuvuleni umlomo, kunye nokuba dysphagia, etc .
3) Shenmai Kaifei Powder: incedise qi kwaye ondla yin, detoxifies kwaye ikhuthaza nokuhamba kwegazi. Isetyenziswa lokubandezeleka isifuba, iphika, kunye nesandi ekhohlela buthathaka njl kwabangela scleroderma kwafunyaniswa ukuba insufficiency of qi kunye yin, stasis igazi kunye abekwe ityhefu.
4) Shenxiang Zhuyun Powder: Oku kuvuselela udakada kunye supplement qi, evumelana isisu yokwehla qi ezibi. Isetyenziswa izitshanguba scleroderma emathunjini ukuba unesifo udakada nokuqhwalela kunye namandla buthathaka kubalulekile, isisu qi ukunyuka ezibangela ekhohlela xa esela amanzi, dysphagia, distension esiswini, stomachache, ukutshintsha urhudo kunye ukuqhina, njl
5) Shenqi Yiqi philisi: It uyazuza qi, kuvuselela udakada, usebenze nokuhamba kwegazi. Isetyenziswa izigulane scleroderma ukuba unesifo qi ukushiyeka, stasis igazi, bebonisa ukuba izigulane zibe nempilo enkenenkene, lassitude, elifutshane umoya, nenzaliseko esiswini kunye distention, ukuhla ekutyeni kunye hypoimmunity, njl
6) Shenling Fuyuan philisi: Oku kuvuselela udakada kunye kwizintso, usinika qi kunye ukufudumala yang. Isetyenziswa scleroderma kwafunyaniswa ukuba ngokulahlekelwa Zhenyuan nemfudumalo buthathaka ezibangela insufficiency kunye Ukugodola, vertigo, ukuduma, ukuqaqamba kunye ubuthathaka esinqeni kunye amadolo, induku izibuko.
7) Guishao Tongluo Powder: ndiziva yang kwaye ikhuthaza kwegazi, osusa spasmolysis, kwaye dredges collaterals. Isetyenziswa scleroderma kunye silwa amileyo apha amaza kunye nempahla, kwaye obubonakala bangamalungu kuyabanda, acrocyanosis, imibala ukutshintsha ukusuka emhlophe, cyanosis ukuya ebomvu xa distally zibethwa silwa, kunokwenzeka utshintsho iimvakalelo mandundu, kunye nezigulane kakhulu nga ha kombisa microdactyly, ekhululeke yokugoba ukuzolula, izilonda ukubola, njl
8) Shenjing Yangrong philisi: Sixhasa eyona ebalulekileyo kunye nokomeleza qi ekwakuphila, uyayondla kwaye ikhuthaza ijwabu ngokutsha. Isetyenziswa scleroderma kwisigaba of dermatrophia kunye asthenia of qi negazi, kunye obubonakala ke inyama ongama kunye yoma kwezihlunu, isikhumba shriveling emathanjeni ezenza kwibhodi ezifana ngqongqo.